Umatshini weQSFP28 | Kwichina QSFP28 Abavelisi, abaXhasi
100Gb / s QSFP28 CWDM4 1310nm 2km DDM DFB transceiver ebonakalayo
I-100Gb / s QSFP28 CWDM4 sisijelo esine, esinokuxhotyiswa, esidlulayo kunye ne-transceiver ebonakalayo eyenzelwe i-100G CWDM yesicelo kunye ne-FEC, iDatacenter kunye nenethiwekhi yeshishini kunye nolunye uqhagamshelo lwamehlo. Ziyathobelana ne-SFF-8636 Specification, IEEE 802.3ba 100GBASE-CLR4 / CWDM4 kunye neTelcordia GR-468-CORE. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS.
I-100GBASE-LR4 kunye ne-112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate 1310nm 100m DDM DML kunye ne-PIN LC transceiver ebonakalayo
I-100Gb / s i-QSFP28 LR4 ijelo-ezine, ezinokuxhotyiswa, ezihambelanayo kunye ne-transceiver ebonakalayo eyenzelwe i-100 Gigabit Ethernet, i-InfiniBand EDR, i-FDR, ii-QDR. Ziyathobelana ne-SFF-8665 Specification, IEEE 802.3bm 100GBASE-LR4 kunye neTelcordia GR-468-CORE. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS.
I-100Gb / s QSFP28 SR4 850nm 100m DDM VCSEL MPO i-transceiver ebonakalayo
I-100Gb / s QSFP28 SR4 yifayile ye-
Ijelo ezine, ezinokupakisha, ezinokuhanjiswa kwe-transceiver ebonakalayo kunye ne-100GBASE-SR4 kunye ne-100 Gigabit Ethernet, infiniBand EDR, FDR, QDR. Ziyathobelana ne-SFF-8665 Specification, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 kunye neTelcordia GR-468-CORE. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS.
I-100Gb / s i-QSFP28 SR4 850nm i-100m ye-DDM yokulinganisa i-VCSEL MPO / i-MTP i-transceiver ebonakalayo
Ijelo ezine, ezixhonyiweyo, ezihambelanayo ze-transceiver ebonakalayo kwaye yenzelwe i-100 Gigabit Ethernet, iZiko leDatha, i-InfiniBand QDR, iDDR, i-SDR kunye nokusetyenziswa kwe-CPRI10. Ziyathobelana ne-QSFP28 MSA ehambelana, IEEE 802.3bm. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS-6.
I-100Gb / s i-QSFP28 LR4 ijelo-ezine, ezinokuxhotyiswa, ezihambelanayo kunye ne-transceiver ebonakalayo eyenzelwe i-100 Gigabit Ethernet, i-OTN OTU4 4I1-9D1F, izicelo zeCPRI 10. Ziyathobelana ne-IEEE P802.3ba kunye ne-OTU4 4I1-9D1F esemgangathweni. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS.
I-100Gb / s QSFP28 PSM4 1310nm 10km DDM DFB transceiver ebonakalayo
I-100Gb / s i-QSFP28 PSM4 ijelo-ezine, ezinokuxhotyiswa, ezihambelanayo kunye ne-transceiver ebonakalayo eyenzelwe i-100GBASE-PSM4 kunye ne-100G Ethernet, i-InfiniBand DDR, usetyenziso lwe-EDR. Ziyathobelana ne-SFF-8636 Specification, IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 kunye neTelcordia GR-468-CORE. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS.
I-100Gb / s QSFP28 PSM4 1310nm 500m DDM DFB transceiver ebonakalayo
I-100Gb / s QSFP28 PSM4 1310nm 2km DDM DFB transceiver ebonakalayo
I-100Gb / s i-QSFP28 PSM4 ijelo-ezine, ezinokuxhotyiswa, ezihambelanayo kunye ne-transceiver ebonakalayo eyenzelwe i-00GBASE-PSM4 kunye ne-100G Ethernet, i-InfiniBand DDR, ii-EDR. Ziyathobelana ne-SFF-8636 Specification, IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 kunye neTelcordia GR-468-CORE. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS.